IShiro Ozaki Memorial Hall
Kuvulwe namuhla ngo-9: 00-16: 30
Umbukiso eHholo leSikhumbuzo le-Ozaki Shiro
Ungabuyisa indawo yokuhlala endala lapho ubuhlala khona iminyaka eyi-10 eyedlule bese uyibuka ngaphandle.Ngaphezu kwemibhalo yesandla (ukukhiqizwa kabusha) nezincwadi, izinto eziyizintandokazi ziyaboniswa.
2021 / 07 / 27 Izincwajana zemininingwaneMayelana nokukhanselwa kwenkulumo yegalari yokwakha eyi-XNUMX
2021 / 06 / 10 Izincwajana zemininingwaneI-Hydrangea isiqhakaza ngokugcwele.
2021 / 04 / 20 Izincwajana zemininingwaneKushicilelwe i- "Memorial Hall Note" (No. XNUMX)
UShiro OzakiOzaki Shiro 1898-1964
UShiro Ozaki, othathwa njengomuntu ophakathi nendawo esigodini saseBunshi Magome, ubuyise indlu ahlala kuyo iminyaka eyishumi waze washona ngo-1964 (Showa 39) wayisebenzisa njengehholo lesikhumbuzo.UShiro wathuthela endaweni yaseSanno ngo-10 (Taisho 1923) futhi wathola isikhundla esiqinile njengombhali odumile ngenxa yesigqi se- "Life Theatre".
Ihholo le-Ozaki Shiro Memorial lavulwa ngoMeyi 2008 ukwethula indawo okwakuhlala kuyo uShiro (igumbi lezivakashi, isifundo, umtapo wolwazi, ingadi) ukudlulisa isiminyaminya saseMagome Bunshi Village.Siyethemba ukuthi abantu abaningi bazosebenzisa leli hholo lesikhumbuzo endaweni ethulile enezindawo eziningi eziluhlaza njengesisekelo esisha sokuhlola iMagome Bunshimura.
I-Panorama ibuka okuqukethwe isebenzisa ikhamera engu-360-degree.Ungathola ukuvakashelwa okubonakalayo e-Ozaki Shiro Memorial Hall.
Amakamelo okusebenza nawokubukisa eShiro Ozaki Memorial Hall, izinto eziyizintandokazi zikaShiro, negalari yezithombe zehholo lesikhumbuzo.
9: 00 ku-16: 30
* Awukwazi ukungena esakhiweni